Ugu fiican ee Zonum ee CAD / GIS - Geofumadas
Mee, 2011 Cartografia, Google Earth / Maps, GPS / Qalabka, Engineering
Solutions Zonum Waxaa goobta ku siinaysa qalab ee ay arday ka ah Jaamacadda Arizona, kuwaas oo in uu waqtiga firaaqada ah waxaa sooco oo si tuurid arimaha code la xiriira qalabka CAD, khariidaynta iyo injineernimada, gaar ahaan files KML. Waxaa laga yaabaa in waxa ka dhigtay in ay caan ahayd in u bixiyey lacag la'aan ah, iyo halka qaar ka mid ah ordaya in miiska ayaa lapsing, kuwa kale ay maamulaan oo kaliya la qoraalkii hore ee Google Earth, qaar ka mid ah ayaa weli ku jira xoog iyo dabcan, kuwa online shaqeeyaan si buuxda u yihiin la heli karo.
Halkan waxaan ku soo bandhigaan warbixin kooban oo ku saabsan 50 codsiyada la heli karaa on Zonums.com, inkastoo ay tahay qeybin xoogaa dhib badan qaar ka mid ah, sida ay codsato in ka badan mid ka mid ah kooxihii in ku adkeeyey, waa isku day ah in koobaan wax kasta oo meeshaas.
Qalabka Google Earth iyo Khariidadaha Google
Curta-it: U oggolow inaad ku kala saartid Khariidadaha Google, wadan ama xulasho. Waxaad ku qeexi kartaa midabada qaybta maamulka, centroid iyo mawduucyada ka dibna aad hoos u dhigto kml si aad u furto Google Earth (ee habka OpenGL). Imtixaanada badankood waxaan helay qalad ah oo aan isbeddelin xulashada xulashada Mareykanka.
DigiPoint: Iyada oo qalabkani, waxaad ku sawiri kartaa Khariidadaha Google, lakabyo dhibcood. Nooca aragtida waa la dooran karaa, iyo sidoo kale haddii aan dooneyno inaan aragno dhibcooyinka latashiga ama iskuduwida UTM; sidoo kale u qaabee nooca icon, midabka, magaca lakabka iyo haddii aan rabno in 2D ama 3D. Ka dibna faylka waxaa loo dhoofin karaa kml, csv, kml, gpx, dxf, txt, boom ama tab.
E-Query: Isku-duwid isku-duubnaanta heerarka hoose ee Google Earth. Si arrintan loo sameeyo, haddii aan liiska wadataa, iyo hadduu ku jiro Lon Laata / ama UTM, degida file ama galay via nuqul / koollada. Markaas, waxaan u qeexaan nooca SEPARATOR (comma, tab, meel), oo ku cidhiidhinaya ka sarreeya button search, nidaamka ku salaysnaan doonaa Google Earth iyo helo z ku kala duwo. Markaas waxaad kala soo bixi kartaa file GPX, CSV, txt ama tab.
Aalad weyn, oo noqon karta mid waxtar leh si loo abuuro qaab dhul ah oo ku salaysan heerarka sare ee Google Earth, xisaabi sarajoogga wadada kaas oo aan leenahay isku-duwadka yada oo kaliya ama aan u beddelayno lakabka 2D ee 3D.
GpxViewer: Tani waa qalab aad u macquul ah, oo muujinaya Khariidadaha Google faylka la qaaday GPS ee qaabka GPX.
Epoint2GE: Qalabkani wuxu ka shaqeeyaa heerka maabka, wuxuuna isku rogaa iskuduwaha faylka Excel si uu kml u akhriyo Google Earth. Kuwa ugu qiimaha badan ee codsigan, waa in ay u ogolaato in ay doortaan unugyada kala duwan, amar ku xiran iskudhafyada, aqbalaan inay ku jiraan juqraafi (jimicsi) ama UTM iyo calaamad. Dabcan, xogta waa inay ku jirtaa WGS84, waa midka isticmaala Google Earth. Inkastoo codsigan aan la heli karin, waxaad isticmaali kartaa tan Naqshad juqraafi ah taas oo dhalinaysa kml oo ka soo baxa UTM.
GE-Census Explorer: Qalabkan waxaa lagu dhajiyay diiwaanka Mareykanka ee tirakoobka wuxuuna fududeynayaa abuurista lakabyo mawduucyo ah oo ku yaala 2 iyo 3. Waxa kaliya oo la shaqeeya saldhigan, laakiin waa tusaale tusaale ah in qof aqoon u leh isticmaalka koodhka uu isticmaali karo xarun kale oo internetka ah.
GE-Kordhinta: Tani waxay la xiriirtaa nidaam caadi ah, kaas oo la xidhiidha cinwaanka PHP ee kml, wuxuu xaddidaa inta lagu soo bandhigay Google Earth oo wuxuu ku soo noqdaa faahfaahin. Waxay noqon kartaa wax aad u faa'iido leh, sida tusaale ahaan in lagu daro Maqaarka ama marka aan dooneyno in aan qabano shaashadaha ka dibna ku dhufo oo ku saabsan iskudhafka geesaha; waxay la mid tahay waxa uu sameeyo Muuqaal GPS ah.
GE-UTM: Qalabkani wuxuu la mid yahay kii hore, labadaba hawlgalka iyo dhismaha. Iyada oo farqiga u dhexeeya waxa kor u kaca waa isku-xidhka UTM ee meel gaar ah.
MapTool: Tani waa noocyo qalabaysan oo ku jira sawir-qaade online ah kaas oo u oggolaanaya hal guji si uu u doorto nooca muuqaalka oo ay ku jirto "duulis" illaa kaas oo aad ka geli karto isku-duwaha UTM gaar ah ama gobolka juqraafi ah.
Fursadaha la heli karo waxaa ka mid ah xogta xogta / xogta ee darajada, daqiiqadaha iyo daqiiqadaha iyo sidoo kale jajab tobanle iyo UTM.
Waxa kale oo aad xisaabin kartaa cutubyo kala duwan oo masaafo toosan ah, oo ah qashinka caanka ah iyo qaybta baaluq. Waxay sidoo kale xisaabinaysaa wadada u dhaxeysa laba jihooyinka waxayna muujinaysaa sare u qaadida dhibic gaar ah oo mitir iyo cagaha.
Isbedelka faylasha kml ee qaabab kale.
Kuwani waa afar qalab oo dabiici ah oo u oggolaanaya in la rogo faylasha laga bilaabo kml ilaa dxf, shp, txt, csv, tab iyo gpx. Dambe wuxuu ku shaqeeyaa internetka.
Kml2CAD (kml ilaa dxf)
Qalabyo kale ama kuwa aan shaqada lahayn ee la shaqeeya qaababka hore ee Google Earth
soo socda, ha cararin qoraalkii ugu dambeeyey ee Google Earth, laakiin ku xusan by hal-abuurka ah oo ay leeyihiin, haddii qof uu doonayo in uu isticmaalo versions socon ama in ay curiyaan fikrado qof ka shaqeeya qalab la mid ah.
GES: Tani ma aha qalab, laakiin garaafka oo muujinaya dhammaan calaamadaha loo isticmaalo Google Earth, oo leh lambarkooda. Fursad u habaynaya faylasha kml iyada oo aan la dagaallamayn aqoonsi iyo sawir ay leeyihiin.
GE-Calaamadaha: Tani waxay u egtahay midkii hore, iyadoo farqiga ay u shaqeyso internetka, iyo marka aad riixdo badhanka, waxaad sameyneysaa qoraal muujinaya xeerka. Dhawaan waxaan arkay arimahan oo dhacaya.
Mapplets: Kuwani waa sharraxaadyo xml ee code ah oo loo adeegsan karo dhinacyo sida iskudubarid gaar ah ama gaaban ee galitaanka Khariidadaha Google. Ficil ahaantii ma aanan awoodin in aan sameysto mapplets sida lagu soo galo adoo galaya Khariidadaha Google.
ZMaps: Tani waa urur isku xirnaanta qalabka kala duwan ee Zonum. Ku dhawaad ​​isku mid ayaa lagu soo koobay qaybtan.
ZTO-Toolbox: Tani waxay ahayd qalab dhamaystiran oo qalab lagu sameeyey Google Earth API, nasiib darro lama cusbooneysiinin DirectX ee qaybaha hadda jira. Si kastaba ha ahaatee waxaa haboon in la ogaado in aan sameeyo wax la mid ah: sawir wareega, qayb jarida, nuqul / dhejin, dhoofin iyo siyaabo kale oo lakala diro si toos ah Google Earth.
Qalabka kartida iyo faylasha CAD
Kuwani waxay xalliyaan hababka caadiga ah ee isbedelka xogta iyo isdhexgalka ka dhexeeya faylasha dxf iyo isuduwayaasha.
Cotrans: Isku-beddelka isuduwayaasha ee xariiqda.
Ectrans: Isku-beddelka iskudhafyada miisaska.
GVetz: Tanina weligeed lama dhisi jirin.
CAd2xy: Ka saara guryaha guryaha dxf.
EPoint2Cad: Exports Excel waxay tilmaamaysaa AutoCAD.
KU2CAD: Abuuri dxf ah iskuxirayaasha yada, online.
Qalabka loogu talagalay faylasha qaabka
Waxyaabaha soo socda ayaa ah qalabka wax lagu baddalo faylasha shpfyada qaabab kala duwan, oo ay ka mid yihiin txt, dxf, gpx iyo km. Inta badan waxay kuu oggolaanayaan inaad qaabeynaysid nooca unugyada iyo astaamaha faylka loo yaqaan "destination destination", waxaa looga baahan yahay ugu yaraan faylasha .shx .shx iyo .dbf.
Kuwaas hadalkoodii hore ayay hadleen mar, ugu yaraan kuwa la xidhiidha Google Earth, laakiin waxaa jira wax ka badan liiska liiskan.
Epa2GIS: Ka soo dhoofinta Epanet ilaa Shapefile.
EpaElevations: Ku dhaji dhererka nadka ee shabakadaha.
EpaMove: Ikhtiyaarkan, oo ka shaqeeya shabakada internetka, shabakad dhamaystiran ayaa laga qaadi karaa meel ka soo jeedda asalka iyo DeltaX / DeltaY. Inta kale waxaa loo xisaabiyaa si toos ah.
EpaRotate: Waxay la mid tahay midkii hore, laakiin waxa uu sameeyo waa in leexiyo shabakadda. Hagaajinta nidaamyada aan la daaleen.
EpaSens: Tani waa xisaabinta shabakada, inay awood u leeyihiin inay la cayaaraan dhexdhexaadiyaha dhuumaha waxayna dalbanayaan inay arkaan saameynta ay ku leeyihiin naadiyada kala duwan.
EpaTables: Tani waxay abuureysaa faylka warbixinta csv ee la xiriira feylka Epanet. Tafaasiisha tirada valfyada, taangiyada, tuubooyinka, iwm.
Excel2Epa: Tani waa macro oo ku saabsan Excel VBA, taas oo dhoofinta dhibco leh iskudhafyada faylka .epa
Gpx2epa: Jadwalkan, faylka la qaaday GPS ee qaabka gpx waxaa loo bedeli karaa Epanet.
MSX-GUI: Mid kale oo sigaar cabba
Net2Epa: Tani waa qeyb ka mid ah qalab kor lagu sharaxay, oo aad ku calaamadeyn kartid dhibcaha Google Khariidadaha iyo u soo qaad qaabka Epanet.
Zepanet: Qalabkan lama horumarin.
Epa2kmz: Ku beddel faylasha Epanet ee Google Earth.
Epanet Z: Tani waa kan ugu fiican, waxay u oggolaaneysaa in ay ku dhejiyaan Khariidadaha Google, lakabka khadka Yahoo ama Bing ee Epanet.
EpaGeo: Tani waxay u oggolaaneysaa isbeddelada faylasha Epanet ee dhinacyada sida unugyada iyo nidaamka isku-duwidda.
Shp2epa: Ku beddel faylasha shp ee Epanet.
Kuwani waxay faa'iido u leeyihiin naqshadda naqasyada ee heerarka qaar ka mid ah shuruudaha Maraykanka iyo isbedelka unugga
Tirada Curve: Tani waxay ka dhigeysaa mid ka mid ah doorsoomayaasha is-le'eg ee loo isticmaalo xisaabinta SCS.
LNP3: Xalliyaan isdhexgalka dhibicda x ee gardarrada ah ee Logarithm dabiiciga ah.
PChartz: Sawirka maskaxeed ee maskaxda si loo xisaabiyo kala duwanaanshaha heerkulka, qoyaanka qoyaanka iyo geedo kale oo sigaar cabbin.
Ucons: Tani waa qalab weyn oo loogu talagalay ardayda injineernimada. Waxay beddeshaa unugyo kala duwan oo ay ku jiraan mass, cadaadis, wakhti, heerkul, awood, iwm.
Zucons: Tani waa qalab isku mid ah, laakiin waxay ku shaqaysaa internetka.
Dhab ahaan shaqo fiican, si xor ah. Inkastoo qaar aan hadda ahayn, waa u qalantaa ku soo celi dhowr cents mahadnaq.
Post Previous«Previous Trimble ayaa iibsaday Ashtech; maxaan filan karnaa
Post Next FastCAD, hooska AutoCADNext »
2 Jawaab in "Ugu Fiican Zonum ee CAD / GIS"
Alex30x isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan jeclaan lahaa in aan ogaado haddii ay jiraan wax xayiraad ah si ay si toos ah u abuuraan meridiyayaasha iyo isku midka ah Autocad
Salaan, ma ii sheegi kartaa nooca iskudhafka ah ee EPANET isticmaalo? waxay yihiin X, Y, laakiin waxaa ka mid ah: UTM, juqraafi-jajab, Cartesian, kaas oo. WAXAAD SHAQEYSO ...